के तपाईको खुट्टाको दोस्रो औंला अरु औंलाभन्दा ठूलो छ ? जान्नुस के संकेत गर्छ ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकके तपाईको खुट्टाको दोस्रो औंला अरु औंलाभन्दा ठूलो छ ? जान्नुस के संकेत गर्छ ?
एजेन्सी – मानिसको व्यक्तित्वलाई खुट्टाको औंलाले झ’ल्काउँछ । खुट्टाको औंलाको आकारलाई हेरी तपाईंको व्य’वहारबारे बुझ्न सकिन्छ । तपाईंको चरित्रलाई खुट्टाको औंलाले संकेत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गरिन्छ ।ठूलो औंला: खुट्टाको ठूलो औंला वा पहिलो औंला अरु औंलाभन्दा धेरै लामो छ भने, त्यस्ता व्यक्ति स्मा’र्ट र क्रि’यटिभ स्व’भावका हुन्छन् । स’मस्याको छिट्टै स’माधान गर्न सक्छन् ।त्यसैगरी तपाईंको ठूलो औंला अरु औंलाभन्दा सानो छ भने, एकै समयमा धेरै काम गर्न सक्ने क्ष’मताको संकेत गर्छ ।